Page 36 – Alinnpya
[ May 31, 2020 ] ပန်ဆယ်လို မေးထားတဲ့ ပြည်သူ့အတိုင်ပင်ခံရာထူးကို ဘယ်သူခန့်သလဲဆိုတာ ဦးဌေးအောင်ဖြေကြား NEWS
[ May 22, 2020 ] “အခုတောင်းမစားရတော့ပါဘူး။ အလှူရှင်များနဲ့ မျှဝေပေးကြသူများကို အသက်နဲ့ ရင်းပြီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်” NEWS
[ May 22, 2020 ] အကိုဝမ်းကွဲတော်ဆပ်သူမှ ညီမဖြစ်သူကို မုန့်ဖိုးတောင်းပေးမည်ဟု လိမ်ညာပြီး အဓမ္မပြုကျင့် NEWS
[ May 22, 2020 ] တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဒေါက်တာလဲ့လဲ့မော် တရားစွဲခံရတဲ့ အမှု (၄)မှု အကျဉ်းချုပ် NEWS
[ May 22, 2020 ] သမန်းကျားကိုမြင့်သီချင်းကို ဂစ်တာတီးပြီး ဆိုပြသည့် ဖွားဖွား အွန်လိုင်းပေါ် နာမည်ကြီးနေ(ရုပ်သံ) CELEBRITY
ကပ်ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး နှောင့်ယှက်သူ ၅ ဦးကို အမှုဖွင့်အရေးယူဟု ပြည်ထဲရေးပြော
April 13, 2020 AlinnPya Comments Off on ကပ်ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး နှောင့်ယှက်သူ ၅ ဦးကို အမှုဖွင့်အရေးယူဟု ပြည်ထဲရေးပြော
ကန့်ဘလူ၊ မြစ်သား၊ ကျိုင်းတုံနဲ့ ပဲခူးမြို့တို့မှာ ကပ်ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးနဲ့ ရိက္ခာဝေတာကို အနှောင့်အယှက်လုပ်ခဲ့သူ ၅ ယောက်ကို အမှုဖွင့်အရေးယူထားတယ်လို့ ပြည်ထဲရေးက ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ဧပြီ ၁၁ ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းက ကျိုင်းတုံမြို့နယ်၊ ဟိုနားအောက်ကျေးရွာနေ ဆယ်အိမ်မှူးက တိုင်တန်းတာကြောင့် အသက် ၅၇ နှစ်အရွယ် ဦးဝင်းအောင်ကို ကျိုင်းတုံမြို့မရဲခန်းမှာ သဘာဝဘေး အန္တရာယ်ဆိုင်ရာဥပဒေပုဒ်မ ၂၆ နဲ့ အမှုဖွင့် စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ ဖြစ်စဉ်ကတော့ မတ် ၃၀ […]
စိတ်ခိုင်ခိုင်ထားပါ။ သိထားဖို့လည်း လိုအပ်လို့ မဖြစ်မနေဖတ်ပါ။
April 13, 2020 AlinnPya Comments Off on စိတ်ခိုင်ခိုင်ထားပါ။ သိထားဖို့လည်း လိုအပ်လို့ မဖြစ်မနေဖတ်ပါ။
ကိုဗစ်လူနာ ဘယ်လိုသေရလဲဆိုတာ,မျက်ကန်းတစ္တေ မကြောက်သူတွေ သိအောင်ရေးပါတယ်. လက်ရှိ အမေရိကန်နိုင်ငံ, ကိုဗစ် အဖြစ်များဆုံးနဲ့ အသေဆုံး နယူးယောက်က ဆေးရုံမှာ ရှေ့တန်းက တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းဆရာဝန်ရဲ့ဖြစ်ရပ်မှန် အတွေ့အကြုံကို ခွင့်ပြုချက်နဲ့ ဘာသာပြန်ပြီးရှယ်ပါတယ်. လွန်ခဲ့တဲ့အပတ်က ငါ့ရဲ့ ကိုဗစ်လူနာတစ်ယောက် အမောဖောက် လာလို့ အောက်ဆီဂျင်ကို အမြင့်ဆုံးထိfacemask မျက်နှာဖုံးနဲ့ထိပေးထားတာသူ့ခမျာ ဒီလောက် အောက်စီဂျင်ငတ်နေလို့ အသက်ကိုမရမက ရှုနေရချိန်မှာတောင် “ I feel good, Doctor” ရှုရတာကောင်းလာပါပြီလို့ပြောရှာတယ်. […]
April 12, 2020 AlinnPya Comments Off on အတာစားသော ကြာသပတေးသားသမီးများရှောင်ရန်
“အတာ”ဟူသည် ” နောက်ဆုံး ကာလ၊ အကျပိုင်း ကာလ” ကို ဆိုလိုပါတယ် “အတာရက်”မှာ သင်္ကြန် အတက်ရက် ဖြစ်၏။ နှစ်တစ်နှစ်၏နောက်ဆုံးရက်ပင် ဖြစ်သည်။ သင်္ကြန်အတက်ရက်နှင့် မွေးနေ့ တိုက်ဆိုင်သူများသည် “အတာသင့်”သူများ ဖြစ် ပါသည်။ ၎င်းကို ” အတာစား ” သည်ဟု ပြောဆို သုံးစွဲနေကြတာဖြစ်ပါသည်။ အတာစားတဲ့ သူများဟာ အတာရက်မှာ ကောင်းမှု ကုသိုလ် များ လုပ်သင့်ပါသည် ။ […]
ငါကျတော့ ချီးစားတယ် မင်းကျတော့ ချီးမစားဘူးဆိုပြီး ချီးပြိုင်စားရာမှ စမ်းချောင်းတွင် လူသတ်မှုဖြစ်တာပါ
April 12, 2020 AlinnPya Comments Off on ငါကျတော့ ချီးစားတယ် မင်းကျတော့ ချီးမစားဘူးဆိုပြီး ချီးပြိုင်စားရာမှ စမ်းချောင်းတွင် လူသတ်မှုဖြစ်တာပါ
ငါကျတော့ ချီးစားတယ် … မင်းကျတော့ ချီးမစားဘူးဆိုပြီး ချီးပြိုင်စားရာမှ လူသတ်မှုဖြစ်တာ … စမ်းချောင်း ဂွစျေး မကြီးကြီးလမ်းထိပ်တွင် စည်ပင်သန့်ရှင်းရေးဝန်ထမ်း အချင်းချင်း ဓားထိုးမှု့ဖြစ် အမှုဖြစ်ပုံမှာ အရက်သောက်ပြီး စကားများကြောင်း၊ သေဆုံးသူသန်းထိုက်ဦးမှ မင်းက ချီးစားရဲလားဟု၊ တရားခံ ဇော်လင်းထက်အား မေးရာ၊ ဇော်လင်းထက်မှ စားရဲတယ်ဟုပြောပြီး ……. စျေးအိမ်သာသို့သွားကာ ချီးယူလာပြီး ဝါးစားကာ သန်းထိုက်ဦးအား ကျွေးရာ၊ သန်းထိုက်ဦးမှ မစားသဖြင့် ” မင်း […]
လူနာအမှတ်၂၅ မှ မင်္ဂလာပွဲလာတက်မှုနှင့် ဆက်နွယ်ပြီး လက်ရှိ Quarantine လုပ်ခံရသူ “၁၆၆ “ဦး ရှိသွားပါပြီ
April 11, 2020 AlinnPya Comments Off on လူနာအမှတ်၂၅ မှ မင်္ဂလာပွဲလာတက်မှုနှင့် ဆက်နွယ်ပြီး လက်ရှိ Quarantine လုပ်ခံရသူ “၁၆၆ “ဦး ရှိသွားပါပြီ
ကပ်ရောဂါ – လူနာအမှတ် “ ၂၅ “မှ မင်္ဂလာပွဲလာတက်မှု နှင့် ဆက်နွယ်ပြီး လက်ရှိ Quarantine လုပ်ခံရသူ “၁၆၆ “ဦး ရှိသွားပါပြီ ၁၁..၄..၂၀၂၀ လူစုလူဝေး မလုပ်ရလို့ နိုင်ငံတော်က ကြေငြာထားတော့ ခန်းမကြီးမှာ မင်္ဂလာ မဆောင်ရလို့ အိမ်မှာဘဲ့ လူလေးနည်းနည်း နှင့် မင်္ဂလာ ဆောင်လိုက်ပါတယ်တဲ့။ ကပ်ရောဂါ – လူနာအမှတ် “ ၂၅ “က ရန်ကုန်ကနေ […]
ဧပြီလ ၁၂ရက် ၁၃ရက် ၁၄ရက်နေ့များတွင် မိုးသည်းထန်ချိန် လျှပ်စီးမိုးကြိုးနှင့် ရုတ်တရက်လေပြင်များတိုက်ခတ်နိုင်
April 11, 2020 AlinnPya Comments Off on ဧပြီလ ၁၂ရက် ၁၃ရက် ၁၄ရက်နေ့များတွင် မိုးသည်းထန်ချိန် လျှပ်စီးမိုးကြိုးနှင့် ရုတ်တရက်လေပြင်များတိုက်ခတ်နိုင်
မိုးကြီးနိုင်ခြင်းသတိပေးချက်… ၂၀၂၀ ဧပြီလ ၁၂ရက် ၁၃ရက် ၁၄ရက်နေ့များတွင် ကယားပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတို့တွင် မိုးရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်။ ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း မိုင်းပန် တာချီလိတ် မိုင်းဖြတ် ကျိုင်းတုံ ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းရိုင်ခရိုင်နှင့် ရွှေတြိဂံဒေသတို့တွင် မိုးရေချိန် ၂လက်မမှ ၄လက်မအတွင်း မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းနိုင်ပြီး မိုးကြီးနိုင်ပါတယ် ။ ၁၃ရက်နေ့မိုးသည်းထန်ချိန် လျှပ်စီးမိုးကြိုးနှင့် ရုတ်တရက်လေပြင်များတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။10/04/2020 at 4:35pm (MMT) SU SU SAN 10/4/20.နွေရာသီ မိုးကြိုးမုန်တိုင်းသတိပေးချက် မိုးဇလအခြေအနေများအရ April […]
အဲ့အစ်မရဲ့ ကျွန်တော့်ကို ကြည့်လိုက်တဲ့ အကြည့်လေး တစ်ချက်ကို မေ့မရနိင်တော့ပါဘူးဗျာ
April 11, 2020 AlinnPya Comments Off on အဲ့အစ်မရဲ့ ကျွန်တော့်ကို ကြည့်လိုက်တဲ့ အကြည့်လေး တစ်ချက်ကို မေ့မရနိင်တော့ပါဘူးဗျာ
အဲ့အစ်မရဲ့ ကျွန်တော့်ကို ကြည့်လိုက်တဲ့ အကြည့်လေး တစ်ချက်ကို မေ့မရနိင်တော့ပါဘူးဗျာ မနေ့က ဟို မင်းသား လင်မယားနဲ့ ဖြစ်တဲ့ ကလေးမလေး ကိစ္စ အတွက် မြောက်ဥက္ကလာ ဆေးရုံကို ရောက်အောင် သွားဖြစ်လိုက်တယ်.. အခုကိစ္စမှာ ဘယ်သူမှန်တယ် မှားတယ် ဆိုတာက တရားဥပဒေ လမ်းကြောင်းအရ သွားရမယ့်အလုပ်… လောလောဆယ် ကို်ယ့်သမီးလေး ဒီလို ကိစ္စဖြစ်တဲ့ အနေအထားမှာ အုပ်ထိန်းသူမိခင် တစ်ယောက်နေရာက ဝင်ခံစားကြည့်တဲ့အခါမှာ… လတ်တလော ဆေးကုသမယ့် […]
ပန်ဆယ်လို မေးထားတဲ့ ပြည်သူ့အတိုင်ပင်ခံရာထူးကို ဘယ်သူခန့်သလဲဆိုတာ ဦးဌေးအောင်ဖြေကြား
“အခုတောင်းမစားရတော့ပါဘူး။ အလှူရှင်များနဲ့ မျှဝေပေးကြသူများကို အသက်နဲ့ ရင်းပြီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်”
အကိုဝမ်းကွဲတော်ဆပ်သူမှ ညီမဖြစ်သူကို မုန့်ဖိုးတောင်းပေးမည်ဟု လိမ်ညာပြီး အဓမ္မပြုကျင့်